Orinasa vokatra, mpamatsy - mpamokatra vokatra China - Fizarana 3
Ny mpamatsy fehikibo dia manana rafitra tsotra sy fiasa miorina, indrindra ny habetsahan'ny famahanana be dia be no tian'ny mpampiasa. Ny fivoarana ara-teknika lehibe anay dia ny fitaovana mpandika zana-kazo, izay afaka manamaivana tsara ny tsindry eo am-bavan'ny tavoahangy sy misoroka ny fantsom-baravarana ao am-bavany.
Ny feeder vibrant double dia mandray ny fitsipiky ny vatan-droa manakaiky ny fihoaram-pefy inertial. Ny herin'ny fanetezana dia omena amin'ny alikaola, ary ny lohataona fingotra manetsiketsika dia manintona mandritra ny folo taona.
Ny andiana feeder vibration elektromagnetika dia ampiasaina amin'ny fitaterana ireo akora fitaterana, granular ary vovoka avy ao anaty fitoeram-pivarotana na fantsona mankany amin'ilay fitaovana mandray isa, tsy miova ary mitohy.
Ny vatan'ny mpampihinana arina varotra mihetsika dia voaisy tombo-kase ary mifandray amin'ny fanokafana ambany ny silo. Ny karazana andohalambo na ny lovia famoahana modely ao amin'ilay masinina dia mifandray mivantana amin'ireo fitaovana ao anaty fitoeram-bokatra boribory.
Ny mpamatsy saribao k-karazana mamaly dia mampiasa mekanisma tsorakazo mampifandray ny takelaka farany ambany 5 degre hidina mba hihetsika mihetsika amin'ny sisin-tsarimihetsika, mba hamoahana ny arintany na ireo vovoka granular sy vovoka hafa miaraka amina fananana kely ary viscosity kely avy amin'ny ny fitaovana fahanana amin'ny fitaovana mandray.
ZG series feeder vibration motor dia be mpampiasa amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, metallurgy, arintany, herinaratra, tsy mahazaka afo, vera, akora fananganana, indostrian'ny hazavana, voamaina ary indostria hafa, afaka manakana, akora vita amin'ny granular sy vovoka, fitaovam-pisakafoanana mitovy na be fatra.
Cone crusher dia mety amin'ny famotehana fitaovana amin'ny hamafin'ny antonony. Izy io dia manana tombony amin'ny famolavolana antonony, fampisehoana marin-toerana, haben'ny fahana lehibe, haben'ny sombin-tsoroka fanamiana ary fanamboarana mora. Indrindra, mamonjy ny herin'olombelona sy ny fizotran'ny valanoranon'ny valanoranony izy io.
Ity milina ity dia azo ampiasaina betsaka amin'ny tsipika famokarana vato amin'ny alàlan'ny famokarana herinaratra, lalambe ary indostria hafa. Crusher efi-trano telo, vatana rotor misy fifandraisana amin'ny tanany tsy misy kitendry, tantanana tsy mahazaka haingam-pandeha avo lenta, ampidiro ny endrika fametrahana, seza misy zana-kazo, lovia tokana misy fiantraikany amin'ny nify, fanokafana multi-directional an'ny frame, visy na fitaovana fanokafana hydraulic. mety kokoa ny manolo ny faritra marefo sy ny fanovana.
Ity andiam-vokatra ity dia manana ny mampiavaka ny tahan'ny fanorotoroana lehibe, ny haben'ny akanjony, ny firafitra tsotra, ny fandidiana azo antoka, ny fikojakojana tsotra ary ny vidin'ny asa ara-toekarena. Ampiasaina betsaka amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, fandrendrehana, fitaovam-panorenana, lalambe, lalamby, fitehirizana rano, indostrian'ny simika ary departemanta maro hafa. Afaka manorotoro fitaovana isan-karazany amin'ny tanjaka compressive latsaky ny 350 MPa.
Ring hammer crusher dia karazana milina fanorotoroana vaovao. Izy io dia mety amin'ny famotehana ireo mora vaky, salantsalany ary fitaovana isan-karazany izay tsy dia misy rano firy. Amin'ny akora fananganana, metallurgy, indostrian'ny simika, indostria famokarana herinaratra, dia ampiasaina indrindra hanapotehana ny arina, ny gangue, ny sandstone, ny shale, ny vatosokay, ny gypsum ary ireo mineraly hafa.
<< <Teo aloha 1234 Manaraka> >> Pejy 3/4